China Stainless vy teny nitarika litera backlit taratra sy mpanamboatra | Lima
Ny tenin'ny vy tsy misy fangarony dia nitarihana tarehin-tsoratra mamirapiratra
SOFT WARM GLOW - mahatonga azy ireo ho tsara tahaka ny jiro amin'ny alina, voaforona daholo ireo, azo ahantona amin'ny rindrina na hijoro malalaka.
Mamorona hatsarana manaitra manaitra ny maso.
Karazana vokatra: Taratasy LED Backlit
Fitaovana: Vy vy / acrylic / LED / PC
Loharano maivana: DC12V
Famolavolana: Ekeo ny fanaingoana, ny atiny, endrika, habe isan-karazany ho an'ny safidinao
Fe-potoana : Matetika 7 andro fiasana, ny tena fotoana dia miankina amin'ny famolavolana sy ny habetsany.
Fanamarinana: LED sy Transformer voamarina ISO9001 / Sedex / CE.
Loko: Mena / mavokely / fotsy / manga / mainty sns.
Warranty: LED sy mpanova -2 taona. Taratasy -5 taona
Site fampiharana: Manoro hevitra hampiasaina eny ivelany ho toy ny fambara dokam-barotra ho an'ny hotely, fivarotana, orinasa, tranobe, sekoly, hopitaly, gara fitobiana, garazy sns.
Ampamirapirato ny teny tianao indrindra amin'ny fotoana manokana, hetsika na fanaovana haingon-trano. Toy ny trano, fety fitsingerenan'ny andro nahaterahana, ivelany, bara, kafe, ravaky ny efitranon'ny ankizy, sns. Mamorona rivo-pitiavana sy mafana, fanomezana ary maro hafa.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ & tarehintsoratra 27 tarehintsoratra sy tarehintsoratra 27 ary litera 0-9, toy ny fitambarana tsy mitombina amin'ny I LOVE U, HOME, MARRY ME, U&M, sns.
Ny jiron'ny diabenay hazavana dia be dia be sy mora entina satria 8,66 santimetatra ny halavany, azo ahantona amin'ny rindrina ary handray batterie 2x AA ka tsy dia be loatra izy ireo ary tsy mila ampidirina amina outlet elektrika.
Vita amin'ny plastika, mitaky bateria 2 AA, tsy tafiditra ao, azo ahantona (misy fantsom-baravarana ao ambadika ho mora ahantona) amin'ny rindrina, amin'ny peratra na apetraka eo ambonin'ny latabatra fandraisana mandritra ny hetsika na fankalazana ataonao.
Mpisintona saina ary manintona ny masonao ho toy ny tampon'ny mariazinao, fety, hetsika manokana, sns.
Alphabets 26, tarehimarika sy marika Arabo 10 &
Omeo ny fahafaha-manao DIY tsy manam-petra: toy ny fitambarana tsy mitongilana ao amin'ny I LOVE U, HOME, MARRY ME, HAPPY BIRTHDAY, 4EVER, sns.
Nanjary tsara tarehy ireo jiro! Nanisy fikitika manokana ny latabatra lohan'izy ireo izy ireo. Nanaitra ireo taratasy! Nahazo dera maro aho. Manoro hevitra ny jiro aho mba handray hetsika rehetra mahazatra na mahazatra!
Teo aloha: nanazava ny vy vy fitaratra telo dimensional teny
Manaraka: Sarimihetsika horonam-baravarankely vita amin'ny horonam-baravarankely